यसमा के छ? त्यो कहाँ छ? कसरी? वेब मार्केटिंग रणनीति | Martech Zone
यसमा के छ? त्यो कहाँ छ? कसरी? वेब मार्केटिंग रणनीतिहरू
शनिबार, मार्च 1, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब तपाईं स्टोर खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं स्टोर कहाँ राख्ने, स्टोरमा के राख्ने, र तपाईं कसरी त्यहाँ पुग्ने मानिसहरूलाई निर्णय गर्नुहुन्छ। वेबसाइट खोल्दै, यो खुद्रा स्थापना हो या होइन, यसैले यस्तै रणनीतिहरू आवश्यक छ:
तपाइँको वेबसाइट मा के हुन गइरहेको छ?
तपाईंको वेबसाइट कहाँ हुनेछ?
मानिसहरूले यसलाई कसरी फेला पार्न सक्छन्?
तपाइँको वेबसाइटमा के हुन गइरहेको छ?
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, स्टोर भण्डार गर्न त्यहाँ दुई कुञ्जीहरू छन्। अधिकांश व्यक्तिहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमा ध्यान दिन्छन्, के मानिसहरूले खरीद गर्छन्। दोस्रो एक यति स्पष्ट रूपमा स्पष्ट छैन, यद्यपि। यो मान्छे को कुरा गर्छन्। एउटा उदाहरण? म अक्सर एक स्थानीय कफी पसल उनीहरूसँग कफि प्रेमीले चाहेको सबै चीज छ - एक आराम वातावरण, महान स्टाफ, महान व्यक्ति र उत्कृष्ट खाना।
कफि शपले अन्य आईटमहरू प्रदान गर्दछ, यद्यपि, व्यक्तिहरू कुरा गर्छन्। तिनीहरू शुक्रवार र शनिबार प्रत्यक्ष संगीत प्रस्ताव गर्दछ। तिनीहरूको प्रत्येक भित्तामा सुन्दर कलाकृति छ जुन दर्शकहरूले खरिद गर्न सक्छन्। र उनीहरूसँग समूहहरू भ्रमण र भेट्न धेरै ठाउँहरू छन् - त्यसैले तिनीहरू चेम्बर अफ कमर्सका बैठकहरू, रेनमेकरहरू, चर्च समूहहरू, कविता रातहरू, इत्यादि राख्छन्।
कफि पसल एकदम राम्रो गर्छ! कफिले एक्लो आफैंको व्यापार राख्दछ - तर विज्ञापन बजेट बिना, यो अन्य आईटमहरू हो जसले नयाँ संरक्षकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले किन व्यापार एक बर्ष पछि बढ्न जारी छ।
तपाईंको वेबसाइटमा उत्कृष्ट सामग्री हुन सक्छ, जस्तै कफि शपले उत्कृष्ट कफी बनाउँदछ। तर यसको मतलब यो होइन कि कोही आउँदैछ! त्यहाँ धेरै रणनीतिहरू छन् तपाइँको व्यवसाय बढाउन सहयोग गर्न को लागी:
मुख मार्केटि of शब्द सिर्जना गर्ने अन्य माध्यमहरू फेला पार्दै ... टिप्पणी गर्दै अन्य साइटहरूमा, भाइरल अभियानहरू, सार्वजनिक बोली, ब्लग व्यापार कार्ड, सामाजिक नेटवर्कमा भाग लिदै, सामाजिक बुकमार्क गर्दै, अन्य साइटहरूमा लिंक गर्दै (क्रस प्रमोशन)।
तपाईको साइट कहाँ छ? यो के जस्तो देखिन्छ? मानिसहरूले कसरी फेला पार्छन्?
जब तपाईं स्टोर खोल्नुहुन्छ, अन्तिम कुरा तपाईं के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेको एक मुख्य सडकबाट केहि माईलहरू निर्माण गर्नु र एउटा भित्ता भवन खोल्नु। तपाईंले स्टोर अवस्थित गर्नुपर्दछ जहाँ मानिसहरूले यसलाई आशा गर्दछ र मानिसहरूले यो फेला पार्न सक्दछन्।
तपाईं पनि एक स्टोर खोल्न चाहनुहुन्छ जुन आरामदायक हो र त्यो मान्छे फिर्ता आउन चाहन्छन्। मबाट सडकको एक कम्प्युटर शप छ जुन म हिंडेको छु तर कहिले सम्ममा आएको छैन। भित्री भाग यस्तो भण्डार कोठरी जस्तो देखिन्छ जुन सबै ठाउँमा फैलिएको थियो। तर जब म सर्वश्रेष्ठ खरीदमा जान्छु, म मद्दत गर्न सक्दिन तर सँधै फ्ल्याट स्क्रिन टेलिभिजनको भित्तामा टहलउँदिन। मलाई त्यहाँको किनमेल बेस्ट बेलाई हेर्न मन पर्छ, किनकी त्यसको सौंदर्यशास्त्रको कारण मलाई त्यहाँ किनमेल गर्न मन पर्छ।
मेरो कफी शपमा तपाईंको पहिलो भ्रमण र तपाईंलाई थाहा छ तपाईं स्टारबक्समा हुनुहुन्न। त्यहाँ चम्किलो र colorsहरू, टन्न आर्टवर्क छन्, र बारिस्टा स्टेशनले संरक्षकहरू सामना गर्दछन् जहाँ उनीहरू हिंड्दै थिए। स्टेशन पनि अगाडि ढोकाबाट टाढा अवस्थित छ, त्यसैले मान्छेहरूसँग पसलमा को छ भनेर हेर्न र उनीहरूको अर्डरमा निर्णय लिन समय हुन्छ। यो एक होईन उत्पादन लाइन पसल तपाईंलाई भित्र र बाहिर हतार गर्न डिजाइन।
तपाईंको साइट स्थान र लेआउटको लागि केहि रणनीतिहरू छन् जुन तपाईंले सोच्नु पर्छ।
सर्च ईन्जिन रणनीतिहरूको डिजाईन र कार्यान्वयन गर्दा मानिसहरूले तपाईंको साइट फेला पार्न सक्दछन्। यसको मतलब प्रति क्लिक विज्ञापन प्रति भुक्तान हुनु आवश्यक छैन - तर यसको मतलब यो छैन कि तपाइँको साइटसँग दर्ता गर्नुहोस् इन्जिनहरू खोज्नुहोस्, तैनाथ गर्दै robots.txt खोज बोटमा प्रवेश गर्न फाइल गर्नुहोस्, र रोजगार साईटम्यापहरू खोजी ईन्जिनको साथ तपाईंको साइट नेविगेट गर्न नेविगेशन योजना प्रदान गर्न, खोजी ईन्जिनलाई सूचित गर्दै जब तपाईं परिवर्तन गर्नुहुन्छ, र खोजी इन्जिन मैत्री सामग्री लेख्नुहुन्छ।
राम्रो डोमेन नाम छान्नुहोस्। त्यो एउटा डोमेन हो जुन मानिसहरूलाई याद गर्न सजिलो छ, एक .com विस्तार (आज पनि महत्त्वपूर्ण छ), र कुनै हाइफिनेसनको अभाव छ। मान्छेहरु yourstore.com सम्झना, तर तिनीहरूले bots-r-us.info सम्झना छैन। कहिलेकाँही उत्तम डोमेनहरू तपाईले खोजिरहनु भएको कुञ्जी शव्द हुन्। एउटा उदाहरण: मेरो ब्लगले SEO रैंकिंगमा अझ राम्रो गर्न सक्दछ यदि डोमेन नाममा 'मार्केटिंग' वा 'टेक्नोलोजी' छ भने।
साइटको सौंदर्यशास्त्र। तपाइँको साइट को लेआउट र समाबेश गर्न तपाईंले चित्रण गर्न चाहानु भएको व्यावसायिकता र मनोवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्न आवश्यक छ। मँ भन्छु यसको चिन्ता नगर्नुहोस् - यो सबै सामग्रीको बारेमा थियो। म गलत थियो, यद्यपि। ठूला साइटहरूलेaको साथ ट्राफिकमा लाभ देखिरहेका छन् नयाँ डिजाइन। वेब २.० साइट खोल्न चाहनुहुन्छ? निश्चित गर्नुहोस् वेब २.० साइट जस्तो देखिन्छ!
तपाईंको साइटमा व्यक्तिलाई कसरी राख्छ र फर्केर आउँछ?
तपाईले यो नाम ठीकै राख्नु भयो, तपाईले सहि राम्रो सामान पाउनुभयो, तपाईले मानिसहरुलाई यस बारे बताउनु भएको छ… तिनीहरू आउन थालेका छन् तर तपाईले त्यसलाई कसरी राख्नुहुन्छ? यदि तपाईंसँग पर्याप्त सामग्री र रणनीतिहरू छैन भने व्यक्तिहरू फर्केर नै आउँदछन्, तपाईं आफैंलाई राख्नुको सट्टा नयाँ आगन्तुकहरू फेला पार्न आफ्नो सबै समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
उत्कृष्ट र सम्मोहक सामग्री कि तपाइँको पाठकहरु को लागी चासो छ उनीहरु लाई फिर्ता आउन राख्नेछ।
के तपाइँको साइट मा एक छ? आरएसएस खुवाउनु हुन्छ? आरएसएस केवल केही राम्रो प्रविधि होइन, यो एक सुन्दर धारणा रणनीति हो। यदि कोही तपाइँको साइटमा केहि समयको लागी पनी फर्किएनन भने, तिनीहरू समय-समयमा उनीहरूका फिडहरूमा यसमा ठक्कर दिन्छन् - हुनसक्छ जब तपाइँले उनीहरू खोजिरहनु भएको कुरा प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ!
के तपाईंको साइटसँग ईमेल सदस्यता विकल्प छ? फेरी, यो एक उत्तम रिटेन्सन उपकरण हो, रुचि सम्भावित वा ग्राहकलाई सूचित गर्दै जुन पहिले नै चासो देखाईएको छ (तपाईंको ईमेलमा अप्ट इन गरेर)।
त्यहाँ पाठ्यक्रम को अपवादहरु छन्। मैले इमानदारीतापूर्वक प्रादा पिकहरू यहाँ प्रयोग गरें किनभने मैले प्रादा स्टोरमा लेख कतै पनि भेट्टाएको छैन ... मेरो विचारमा एक भयानक स्थान पनि एक राम्रो भाइरल अभियान हुन सक्छ!
टैग: एक वेबसाइट निर्माणकफी पसलडोमेन नामpradaअवधारणसाइटसाइट सामग्रीस्टोरवेबसाइटमुखको कुरा
हाम्रो २०१२ सुपर बाउल, संस्करण २!
एक डलर खर्च गर्न एक पैसा बचत गर्दै